Warshada dhirta toonta ee Shiinaha iyo alaableyda | RY AGRI
Mashiinka beero-beedka toonta waxaa si weyn loogu isticmaali karaa bannaanka iyo buuraha si loo xaqiijiyo abuurista toonta ee baaxadda. Iyada oo la isku hagaajinayo madaxa toonta, waxay xaqiijin kartaa joogitaanka barta joogtada ah.
Awood isku mid ah
50-150 hagaajin karo
Abuurista qoto dheer
0-100 hagaajin karo
3-farta lagu fiiqay
1. Isku-dhafan wax ku ool ah oo macquul ah ee mashiinka oo dhan wuxuu hubiyaa in geeddi-socodka hawlgalku yahay mid deggan, lagu kalsoonaan karo oo wax ku ool ah.
2. Jihada toonta si dhakhso leh ayaa loo hagaajiyaa si loo hubiyo heerka noolaanshaha ee wax beerista.
3. Si joogto ah oo sax ah u fiiri iniinaha si loo hubiyo in la beero, la kala dheereeyo, iyo soo noqnoqoshada abuurka.
4. Cufnaanta wax beerista iyo isku mid ahaanshaha abuurka.
5. Adeegsiga cagaf cagaf afar-lugood leh, qiimo jaban, qaab-dhismeed fudud, fududayn kara hawlgallada
Ku rakibidda beero iyo cagaf: ku xir taageerada kaabidda hoose ee beertada leh ulta ganaaxa hoose ee cagaf-cagaf, ku xir taageerada ka-hakinka sare leh ulta ganaaxa sare ee cagaf-cagaf, oo xir xiirida biinanka iyo qufulka xiridda ka dib isku xirnaanta Dheellitir ka joojinta isku xidhka dhejiska. Xidho usheeda dhexe pin iyo qufulka pin ka dib isku xirnaanta. Isku hagaaji usha hagaajinta dhexda ee qaabka ganaaxa, ka dhig geedaha heerka ka hor iyo ka dib; dheellitirka hakinta baalka bidix iyo midigta saxda ah, u samee qaabka bidix iyo midig ee heerka; hubinta isku dheelitirka silsiladda iyo isku halaynta marka dhirtu shaqeyso.
1. Dayactirka ka hor inta aan la gelin duurka, waa inaan nadiifinaa qoraxda ku jira sanduuqa abuurka iyo cawska iyo carrada dusha sare ee godka si loo hubiyo inay xaaladdu wanaagsan tahay, oo lagu daro saliidda duubista qaybaha gudbinta iyo wareejinta ee cagafyada iyo dhirtu iyadoo loo raacayo shuruudaha tilmaamaha.
Jirku ma janjeeri karo, ka dib markuu beero iyo cagaf laalaada, ha janjeerin, shaqadu waa inay sameysaa jir ka hor iyo ka dib xaalada jiifka.
3. Dhammaan noocyada hagaajinta waxaa loo sameeyaa iyadoo loo eegayo qeexitaanka iyo shuruudaha cilmiga beeraha, xaddiga abuurka, kala-dheereynta safka furitaanka godka, qoto-dheerida hagaajinta godka godku waa ku habboon tahay.
4.Fiiro u yeelo ku darista abuurka, ku dar abuurka sanduuqa abuur si aan loo gaarin wax yar, oo kala duwan, si loo hubiyo waxtarka abuurka; abuurka ku jira sanduuqa abuurka inta lagu guda jiro hawlgalka waa inuusan ka yaraan 1/5 mugga sanduuqa abuur; si loo hubiyo dheecaanka miraha leh ee abuurka.
Hore: Abuurka Qamadiga
Xiga: Buufiska firidhsan